I-YH HYDRAULIC - Ukufakelwa kwe-Hose Hydraulic Hose, ama-Hydraulic Ferrules, Umthengisi Wezinsimbi Ze-Hydraulic Machines
Email: sales2@yhhoseassembly.comI-Tel: + 86-15824530883 Select LanguageAfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CorsicanCroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchFrisianGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHawaiianHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdish (Kurmanji)KyrgyzLaoLatinLatvianLithuanianLuxembourgishMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanScottish GaelicSerbianSesothoShonaSindhiSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSudaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshXhosaYiddishYorubaZulu
Ukufakwa kweHholo lokuHlunga
Hose Hose Crimping Machines
I-hydraulic flange 87312 SAE J516 Ukufakela ukufakelwa kwama-hydraulic
Ngosizo olunamandla lwabaqeqeshi bethu abanolwazi, sikwazi ukukhiqiza i-gamut eningi ye-Hydraulic flange 87312 SAE J516 Ukufakela ukufakelwa kwama-hydraulic. Yenziwe ngokuyinhloko ngokusizwa ngezindlela zokusika ngokusebenzisa ikhwalithi engcono kakhulu eluhlaza ngaphansi kokuqondiswa okusebenzayo kochwepheshe bethu bezobuchwepheshe abaqeqeshiwe. Okubalulekile: I-Carbon Steel Technical: Uhlobo Olufakwe: Ukubambisana, Amaflangeni Indawo ...
i-carbon steel threaded i-JIC yokufakelwa kwe-hydraulic eqondile i-hose hydraulic hose i-jic amafayili wesifazane
Inkampani yethu iye yazi kahle ubuciko ekuhlinzekeni i-carbon steel threaded i-JIC yokufakelwa kwe-hydraulic eqondile i-hose hydraulic hose i-jic femin fittings kumakhasimende. i-carbon steel threaded i-JIC yokufakelwa kwe-hydraulic eqondile i-hose hydraulic hose i-jic ama-fittings wesifazane aklanyelwe futhi athuthukiswe ngokusho kwezidingo nezidingo zamakhasimende. Ukwaziswa okunikezwayo kuhloswe kumadoda ngobukhulu obuhlukahlukene, imiklamo, amaphethini kanye ...
Ukufakelwa kwe-hose hydraulic / steel hydraulic fittings ferrule
Siyiyona inhlangano ebaluleke kakhulu embonini, sihlanganyela kakhulu ekuhlinzekeni ububanzi obuhle kakhulu bokufakelwa kwe-hose hydraulic / hydraulic fittings ferrule. Amapayipi ahlinzekwa nge-hydraulic / hose hydraulic fittings ferrule ayenziwa ngokuqondile ngabasebenzi bethu abanekhono basebenzisa ikhwalithi engcono kakhulu yezinto ezibonakalayo nobuchwepheshe obuphambili. I-hose yokufakelwa kwe-hydraulic hose / i-hose hydraulic fittings ferrule iyakwazisa kakhulu ...
Isilisa se-ORFS Isitifiketi Sokufakelwa Kwezingxenye Ze-Hose Ezingaguquguquki
Singabantu inhlangano evelele eyenziwa ekwakhiweni nasekuhlinzekeni inqwaba yamafomu we-ORFS e-Male FS Realable Redraable Hydraulic Hose. Le mikhiqizo ikhiqizwa ngokusebenzisa izinto ezinhle kakhulu zekhwalithi ezitholakalayo kusukela ekubuyiseleni kanye nabathengisi abathembekile bemakethe. Ukuze sithole izidingo ezihlukahlukene zamaklayenti, sinikeza la ma-ORFS flat flat Seal Reusable Hydraulic Hose ...
Ukufakwa kwe-70011 / 72011hydraulic banjo, ukufakwa kwe-bsp / metric banjo hydraulic hydraulic kanye nezixhumi
Sinikeza ububanzi obuningi bekhwalithi ye-70011 / 72011hydraulic ehambisana ne-banjo, ukufakwa kwe-bsp / metric banjo hydraulic kanye nezixhumi kumakhasimende ethu abalulekile. Ngenxa yokusebenza kwayo okuhle nokuklama, lezi zici ze-70011 / 72011hydraulic zokufaka ama-banjo, ukufakwa kwe-bsp / metric banjo hydraulic hydraulic kanye nezixhumi zidinga kakhulu izicelo ezihlukahlukene zezimboni. Ukunikezwa kwe-70011 / 72011hydraulic ehambisana ne-banjo, ukufakwa kwe-bsp / metric banjo ye-hydraulic hydraulic kanye nezixhumi kuhanjiswa ngaphakathi ...
I-YH HYDRAULIC I-90 I-Hose Hydraulic Hose Ukufakela Imfucuza
Inhlangano yethu ehlonishwayo enikezela uhlaka olubanzi lwe-YH HYDRAULIC Female 90 Hydraulic Hose Ferrule Fitting. Yonke imikhiqizo yethu ithuthukiswa esikhungweni sethu sokukhiqiza se-state-of-the-art besebenzisa izinto eziphezulu. Izinto ezisetshenziselwa ukukhiqiza zitholakala kubathengisi abathembekile bemakethe. Ngaphezu kwalokho, sinikeza lezi YH HYDRAULIC Female 90 Hose Hydraulic Hose Ferrule Fitting in various ...
I-316 Insimbi Engagqwali Amadoda Amethrikhi DIN Amandla Aqinile Ama-Hose Ukufakwa
Singabantu inhlangano evelele eyenziwa ekwakhiweni nasekunikezeni inqwaba ye-316 Stainless Steel Male Metric I-DIN enamandla kakhulu. Le mikhiqizo ikhiqizwa ngokusebenzisa izinto ezinhle kakhulu zekhwalithi ezitholakalayo kusukela ekubuyiseleni kanye nabathengisi abathembekile bemakethe. Ukuze sithole izidingo ezihlukahlukene zamakhasimende, sinikeza lezi 316 Stainless Steel Male Metric ...
carbon steel adapters jic i-hose ye-hydraulic ehambisanayo
Ukuze sikwazi ukufaka indawo ephawulekayo embonini, sinikeza ububanzi obuningi be-carbon steel adapters jic Ukufakelwa kwe-hose ye-hydraulic ebizwa ngokuthi i-thermostatically baling in nature futhi isetshenziselwa ukusebenzisana kagesi. Sisebenzisa yonke i-carbon steel adapters jic I-hose ye-hydraulic ehambelana nabadayisi abaqinisekisiwe embonini, abayibumba njengekhwalithi ehleliwe ...
Ukufakelwa kwe-Hydraulic 45 Degree BSP Isihlalo Sesikebhe Sesibili Sesikazi
Sinikeza ububanzi obuningi bekhwalithi ye-premium ye-premium Hydraulic Fitting 45 Degree Isihlalo Sesikebhe Sesikazi Sabantu Sezimpumputhe kumakhasimende ethu abalulekile. Ukusebenza kwabo okuhle, ukumelana nokubola, ukuphila okusebenza isikhathi eside nokuklama okungenasici kwenza lezi ziqu ze-Hydraulic Fitting 45 Degree BSP Female Female Flat ifuna kakhulu emakethe. Ngenethiwekhi yethu yokusabalalisa ebanzi, sithumela le-Hydraulic Fitting 45 Degree BSP ...
i-zinc plated double connector hydraulic fitting carbon steel
Ngosizo olunamandla lwabaqeqeshi bethu abanolwazi, sikwazi ukwakha i-gamut eningi ye-zinc plated double connector hydraulic fitting carbon steel. Yenziwe ngokuyinhloko ngokusizwa ngezindlela zokusika ngokusebenzisa ikhwalithi engcono kakhulu eluhlaza ngaphansi kokuqondiswa okusebenzayo kochwepheshe bethu bezobuchwepheshe abaqeqeshiwe. Thayipha: I-Model Model Yokufaka: Igama legama le-P90011: YH HYDRAULIC Indawo ...
I-Carbon steel high quality hydraulic hoses kanye nokuxhumana
Sibeke isikhundla esihlukile futhi esinamandla emakethe ngokuhlinzeka ngezinga eliphakeme lezinga eliphezulu le-Carbon steel high quality hydraulic hoses kanye nokuxhumana. I-Carbon steel high hora hydraulic hoses kanye nokuxhunyaniswa kwenzelwa ukuthengiswa ekupheleni kokusebenzisa izinto ezibonakalayo ezibonakalayo kanye nobuchwepheshe obuphambili ngokunamathela embonini yemikhuba. Ngaphezu kwalokho, le nqensi ye-Carbon ephezulu ...
I-90 de SAE FLANGE 3000 PSI, i-hose yokufakelwa kwe-hydraulic, i-tube fit
Ukusebenzisa imali enkulu embonini enkulu, siye sakwazi ukuveza i-90 ephawulekayo ye-SAE FLANGE 3000 PSI, i-hose yokufakelwa kwe-hydraulic, i-tube fit. Le mikhiqizo yenziwa ngokusebenzisa i-aluminium ephezulu, ithusi nensimbi efaka ubuchwepheshe be-CNC. I-90 de SAE FLANGE 3000 PSI, i-hose yokufakelwa kwe-hydraulic, i-tube fit ...
I-JIC yensikazi engenazinsimbi ezingenazinsimbi zokufakelwa kweHholo
Senza izinhlobo ezahlukene zezinsikazi ze-JIC ezingenasinsimbi ze-hydraulic Hose Fittings, ama-JIC wesifazane angenalutho angenawo ama-hydraulic Hose Fittings asetshenziselwa izimboni ezihlukahlukene ezifana ne-Automobile, i-Oyili neGesi njll. Siyizakhiwo zokukhiqiza njengamazinga we-DIN 2353 / ISO / SAE / IS , futhi senza umkhiqizo we-JIC wesifazane ongenamakhawulo we-Hiax hydraulic Hose Fittings njengemfuneko yamakhasimende ngamunye. Okubalulekile: Insimbi Engagqwali ...
izinga elihle lama-adapters hydraulic izingxenye zezingxenye zokugcina ze-banjo ezifanelekile
Singenye izinkampani eziyaziwayo emkhakheni wokukhiqiza, ukuhlinzeka, ukuthumela izinto, ukuhweba. Ukwakheka nokuthengiswa kwekhwalithi elungile ye-adapters ye-hydraulic izingxenye zezingxenye zokungcebeleka ze-banjo ezifanelekile. Lezi yizici ezivivinywa ngaphansi kokuqondiswa kochwepheshe bethu. Ngokuqhubekayo lezi zinokusebenza okuqinile nokusebenza ngamandla. Ngaphezu kwalokhu le mfanelo emihle ye-adapters hydraulic banjo ...
I-SS304 I-Swivel One Piece Type I-Hose Hose Eyingxubevange
Singomunye wabahlinzeki abadumile bekhwalithi enkulu ye-SS304 Swivel One Piece Type Hydraulic Hose Fitting. Ukunikezwa kwethu kwe-SS304 Swivel One Piece Type Hydraulic Hose Ukufakwa Kuyaziwa ngokuba yizimo ezibucayi, ukwakha okuqinile, ukwakhiwa kwe-ergonomically, ukuqina, ukuphelelwa isikhathi esiphezulu nokuphelela okuphakeme. Sakha izinga eliphakeme le-SS304 Swivel One Piece Type Hose Hydraulic Fitting in ...
I-JIC 45 degree Ukufakelwa kwe-Hose Hydraulic Hose Fittings 26741
Sixhaswe ngempumelelo yezimboni esizibandakanya ekukhiqizeni, ekuthekeliseni, okwenziwe nge-wholesaling nokuhlinzeka nge-JIC 45 degree Hydraulic Hose Fittings Female Fittings 26741. I-JIC 45 degree ye-Hose Fittings Fittings Female FITTINGS i-26741 iyatholakala ngezichasiselo ezahlukene zokukhetha. Le JIC 45 degree Ukufakelwa Kwama-Hose Okufakelwa Kwama-Female Fittings Ama-Female Fittings i-26741 akhiqizwa ngezingqinamba ezivunyelwe ngekhwalithi ezigcina engqondweni ...
I-hydraulic fit fit male in carbon steel hydraulic fit
Singomunye wamagama athembekileko wokunikela nge-hydraulic fit fit male in hosebhodi ye-carbon steel hydraulic efanelwe amakhasimende ethu aqakathekileko. Ibanga elihlinzekwe nge-hydraulic fit fit male in carbon steel hydraulic fit fit is made from high grade quality raw materials. I-Hydraulic fit fit metric male in carbon steel hydraulic fit fit is widely used in various ...
I-YH HYDRAULIC i-hose engxenyeni ye-hydraulic ehlanganiswa nayo yonke into
Inkampani yethu ihlonishwa kakhulu ekunikezeni i-YH HYDRAULIC i-hose engxenyeni ye-hydraulic ehambisana nayo yonke imikhakha kumakhasimende. I-YH HYDRAULIC i-hose engxenyeni ye-hydraulic ehambisana ne-hydraulic edingekayo emakethe, ngenxa yokwakhiwa okuqinile, ukuphila okude, ukukhathazeka ngokukhululekile nokumelana nokuqina kwesibindi. Ukwaziswa okunikezwayo kuningi okudunyiswa amaklayenti ngokuba nezimfanelo ezingenakuphazamiseka nokuphawulekayo. Le YH ...
I-Adapter Hose Hydraulic Ipayipi Yensimbi Engenasici Ukufakela
Singomunye wamagama athembekile ukuze sinikeze i-Hydraulic Hose Adapter Ipulazi Yensimbi Engenasici Efanelekayo kumakhasimende ethu ayigugu. Uhlobo olunikeziwe lwe-Hydraulic Hose Adapter Ukufakelwa kwe-Pipe ye-Steel Stainless Ukukhishwa kwenziwa ngekhwalithi ephakeme yekhwalithi yekhwalithi ephezulu. I-Adapter Hose Addraulic I-Adapter Yensimbi Engenalutho Ukufakelwa kwe-Steel isetshenziswa kabanzi ezimboni ezihlukahlukene. Le Adapter Hose Hydraulic Ipulazi Yensimbi Engenalutho Iyafaneleka ...
Umshini ophezulu wokufakelwa kwe-hose hydraulic ukufakwa kwe-hose Parker Standard
Ngokugcina ithrekhi yokuthuthukiswa kwezimakethe zamanje, sinikeza uhla oluhle kakhulu lwe-hose high hydraulic fittings eParker Standard.Ukunikezwa kwe-hose pressure hydraulic hose I-Parker Standard itholakala kubathengisi abaqinisekisiwe emakethe ngokunamathela emibambiswaneni yemikhiqizo. hlola lokhu kuhlanganiswa kwe-hose ye-hose ye-hydraulic i-Parker Standard ngokumelene nemingcele ehlukene ukuze ...
Mayelana ne-YH Hydraulic
I-Ningbo YH Hydraulic Machinery Factory yasungulwa e-2003 ne-factory yayo e-Ningbo, eChina. Ichweba eliseduze eliseduze ne-Ningbo sechwep. I-YH Hydraulic iyinhlangano ekhethekile eveza futhi inikeza ukufakwa kwe-hose ye-hydraulic, ama-hydraulic ferrules, ukufakwa kwe-adapter, ama-hydraulic hoses, imishini yamanzi, Njll.
I-DX68 CE STEER LOADER HOSE umshini wokuhlwitha 4 "4S 380V 400V 240V
carbon steel NPT hydraulic okusheshayo hose coupling
I-2 "YH51M umshini wokushisa i-hose we-hydraulic ukudayiswa
i-hose hydraulic connector / ukufakwa kwensimbi
I-Metric Female I-24 Degree I-O-RING ye-E-RING yokubuyiswa kwe-hydraulic hose
Intengo ephansi! CE 9sets mahhala ifa ngokushesha ukushintsha ithuluzi ukhonkolo hose crimping machine
I-Copyright © Ningbo YH Hydraulic Machinery Factory | showroom | Ibalazwe